सर्वोच्चको फैसलासँगै माधव पक्षको अवस्था कस्तो, के छ एमालेभित्रको समीकरण ? « Sansar News
सर्वोच्चको फैसलासँगै माधव पक्षको अवस्था कस्तो, के छ एमालेभित्रको समीकरण ?
फागुन २४, काठमाडौं । विभाजनको लागि ठिक्क परेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अनौठो ठाउँमा पुगेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा रहेको पूर्वमाओवादीको ठूलो पंक्ति र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको पूर्वएमालेको पंक्ति एकातर्फ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष अर्को तर्फ रहेको अवस्थामा फैसलाले पूर्वमाओवादी एकातर्फ र पूर्वएमाले अर्को तर्फ पु¥याईदिएको छ ।
अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामलाई मात्र बदर गरेन तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालिन नेकपा (एमाले)लाई पनि ब्यूँताईदिने काम गरेको छ । नेकपाभित्र जसको प्रभाव गम्भीर रुपमा देखापरेको छ ।
अदालतको फैसलाले माओवादी पक्षलाई खासै समस्यामा नपुर्याए पनि एमालेभित्र भने निकै संकट पैदा गराएको छ । फैसलाले साबिक एमालेलाई ब्यूँताउँदै गर्दा माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल पक्षको आगामी राजनीतिक भूमिका के हुने अन्यौंल बनाईदिएको छ । नेपाल स्वंयले पनि फैसला निकै अनपेक्षित र आफ्नोविरुद्व मात्रै केन्द्रित भएको बताईरहेका छन् । उनले फैसलालाई कानूनी नभई राजनीतिक भएको बताएका छन् ।
कस्तो छ एमालेभित्रको अंकगणित ?
एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत मात्रै नभई झण्डै दुई तिहाई बहुमत सदस्यको नेतृत्व गर्दछन् । प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको साबिक एमालेका १ सय २० सांसदमध्ये दुई तिहाई बढि सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा छन् । जहाँ माधव नेपालको पक्षमा मात्रै ३७ जना अर्थात् झण्डै ३१ प्रतिशत मात्रै सांसदको समर्थन रहेको छ ।
अर्कोतर्फ केन्द्रीय समितिमा पनि माधव नेपालको अवस्था निकै कमजोर छ । २०७१ असार १९ देखि साउन १ सम्म सम्पन्न नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनले १५९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो । जहाँ पछिल्लो समिकरणसँगै ओली पक्षका झण्डै २ तिहाई सदस्य देखिएका छन् ।
पार्टी फुटाउन पनि नमिल्ने र सँगै रहन पनि नसक्ने
अदालतको फैसलाले पूर्वएमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै गर्दा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष भने यता न उताको भएका छन् । उनीहरु कानूनत न पार्टी फुटाउने अवस्थामा छन् नत व्यवहारिक रुपमा सँगै रहने अवस्थामा छन् ।
नेकपा विभाजनसँगै प्रचण्ड पक्ष र माधव पक्ष एक ठाउँमा आएका थिए । यस्तो अवस्थामा साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रमा जाने वा एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने अन्यौंल बनेको छ ।
राजनीतिक रुपमा निकै अनपेक्षित परिणाम व्यहोरेका माधव नेपालले भनेका छन्, ‘सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई नै पऱ्यो, किन यस्तो भयो होला रु यो त विचित्रै भयो । जुन चिजमा प्रवेश नै नगर्नुपर्ने किन यस्तो गरेको होला रु के हो रु टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो हेर्नुस्, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन ।’
हाल विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न संसद र केन्द्रीय सदस्यमा न्यूनतम ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ३३ प्रतिशत पनि नपुग्ने अवस्थाले गर्दा माधव नेपाल पक्ष यता न उताको भएको छ ।